ह्वावेको नयाँ मेटबुक १३ नोटबुक सार्वजनिक, एप्पलको म्याकबुक एयर भन्दा पातलो र हलुका - Technology Khabar
हाम्रो बारेमा, सम्पर्क
» ह्वावेको नयाँ मेटबुक १३ नोटबुक सार्वजनिक, एप्पलको म्याकबुक एयर भन्दा पातलो र हलुका
ह्वावेको नयाँ मेटबुक १३ नोटबुक सार्वजनिक, एप्पलको म्याकबुक एयर भन्दा पातलो र हलुका
Technology Khabar २४ कार्तिक २०७५, शनिबार
काठमाडौँ । ह्वावेले आफ्नो नयाँ मेटबुक १३ लन्च गरेको छ । कम्पनीले चीनमा आयोजित एक कार्यक्रममा नयाँ मेटबुक १३ (Matebook 13) उहान रिसर्च इन्टिच्यूटमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि कम्पनीले मेटबुक एक्स प्रो, मेटबुक एक्स, मेटबुक डि, मेटबुक ई लगायतका रेन्जहरु सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो नयाँ नोटबुकमा न्यारो-स्क्रीन फूल-स्क्रीन डिजाइन राखिएको छ । ह्वावे मेटबुक १३ मा नयाँ एस्थेटिक डिजाइन अपनाईएको छ । यसको सरफेस एलुमिनियम एलोय सेरामिक स्याण्डब्लास्टिंग प्रोसेसद्धारा बनाईएको छ ।
ह्वावेको नयाँ मेटबुक १३ तीन कलर भेरिएन्टमा आउँछ, जसमा डिप स्पेस ग्रे, सिल्भर मून र चेरी पाउडर गोल्ड कलर छ । ह्वावे मेटबुक १३ को अधिकतम तौल १.२८ किलोग्राम छ भने यो १४.९ एमएम पातलो रहेको छ ।
ह्वावेको मेटबुक १३ परम्परागत किसिमको नोटबुक उत्पादन हो जसमा १३ इन्चको आइपीएस स्क्रीन रहेको छ, जसकोे रिजोल्यूशन २१६०ह१४४० पिक्सेल छ । यसको स्क्रीन रेसियो ३ः२ रहेको छ ।
ह्वावेको नयाँ नोटबुकमा इन्टेलको ह्वीस्की लेक कोर आई सेभेन ८५६५यू प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । यसले केबल १३ वाट पावर मात्र उपयोग गर्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैगरि यसमा ग्राफीक्स कार्डमा यूएचडी६२० अथवा एभिडिया एमएक्स १५० अप्सनमा प्रयोग गरिएको छ ।
यो मेटबुक १३ मा ८ जीबीको र्याम राखिएको छ भने २५६ जीबीको हार्ड डिस्क रहेको छ । यसमा ४२ एमडब्लू ब्याट्री राखिएको छ ।कनेक्टिभिटीको लागि ह्वावे मेटबुक १३ मा यूएसबी टाइप सी, ३.५ एमएम हेडफोन ज्याक राखिएको छ ।
ह्वावेले आफ्ना नोटबुकहरुको तुलना धेरै जसो एप्पलको म्याकबुकसँग गर्ने गर्दछ । ह्वावेको नयाँ मेटबुक १३ एप्पलको म्याकबुक एयर भन्दा ६ प्रतिशत पातलो रहेको दाबी समेत गरेको छ ।
ह्वावेकाअनुसार मेटबुक १३ ले पहिलो पटक ह्वावे शेयर ३.० टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दछ । यो प्रविधि पहिलो पटक कम्पनीको मेट २० सिरिजको स्मार्टफोनमा देखिएको थियो । मेट २० सिरिजले तपाईँको नयाँ नोटबुकमा १००० वटा फोटोहरु केबल २ मिनेटमा पठाउन सक्दछ । यो एनएफसीमा आधारित फीचर हो ।
ह्वावेले नयाँ मेटबुक १३ को मूल्य भने सार्वजनिक गरेको छैन् ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७५, शनिबार
ह्वावेद्धारा अण्डर डिस्प्ले क्यामरा पेटेन्टका लागि निवेदन
ह्वावेले आफ्नै अपरेटिंग सिस्टमका साथ स्मार्टफोनको परीक्षण गर्दै, यहि वर्ष बजारमा आउने
२० श्रावण २०७६, सोमबार
शिओमीको ‘नोटबुक एयर फोरजी’, डाटाकार्डबाट फोरजी चलाउन सकिने
११ पुष २०७३, सोमबार
चिनियाँ टेक कम्पनी हुवावे समस्यामा, अमेरिका,अस्ट्रेलिया र जापानले पूर्वाधार निर्माणमा कम्पनीलाई रोक्ने
स्मार्टफोन निर्माता ह्वावेका ग्लोबल चीफ फाइनान्सियल अफिसर पक्राउ, यस्तो छ पक्राउको कारण
२० मंसिर २०७५, बिहीबार
ट्याबलेटको माग विश्वभर घट्दै, यस्तो छ बजार घट्नुको कारण
२० बैशाख २०७५, बिहीबार
तपाइँको स्मार्टफोन सँधै अधिक तात्ने यी हुन प्रमुख ४ कारणहरू, जान्नुहोस् समाधानको उपायहरु
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार
घरमा सिसिटिभी राख्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ ? पुरानो स्मार्टफोनलाई यसरी सिसिटिभी क्यामरा बनाउनुस्
११ जेष्ठ २०७७, आईतवार
फोनबाट फोटो खिच्दा यी महत्वपूर्ण कुराहरू ध्यानमा राख्नुहोस्, प्रत्येक फोटो प्रोफेशनल देखिनेछ
३० बैशाख २०७७, मंगलवार
स्मार्टफोन ढिलो चार्ज हुँदा दिक्क हुनुभयो, त्यसोभए फास्ट चार्ज गर्ने यी पावरफुल टिप्स हेर्नुस्
गूगलले सार्यो अपरेटिङ्ग सिस्टम एन्ड्रोयड ११ बीटा भर्सनको घोषणा कार्यक्रम, यस्तो छ कारण
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार
दश करोड बढी एन्ड्रोयड स्मार्टफोनलाई प्रभावित पार्ने चिनियाँ स्पाईवेयर, तपाईँको फोनमा पनि छ की?
एप्पलले रिफर्बिस्ड आईफोन एक्सआर आधिकारीकरुपमा बिक्री गर्दै
भारतमा ११ अंकको मोबाइल नम्बर बनाउने प्रस्ताव, ल्याण्डलाइनमा पनि परिवर्तनको योजना
इलेक्ट्रिक भेहिकलको भन्सार बढाईयो, क्षमताको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क दर
कियाको विद्युतीय गाडी निरो बुकिङ गरेमा लकडाउन खुलेलगत्तै चलाउन पाउने
स्टार्टअप कम्पनी ब्याट्रीको नयाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर जीपीएस:आई भारतीय बजारमा सार्वजनिक
जनरल मोटर्सले १० लाख माईलसम्म कुद्ने ईलेक्ट्रिक भेहिकल ब्याट्री विकास गर्दै